Chii chinonzi CEO uye nderipi basa rake mukambani? | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | eCommerce, ECommerce kudzidziswa, Marketing
Icho chirevo chawakanyatsoona chakaratidzirwa munhau nehupfumi, asi ungangodaro usingazive zvazvinonyatsoreva. Zvakanaka, iyo CEO inomiririra chaizvo Chief Executive Officer. Asi kumiririrwa kwake panguva ino kunokanganisa kuti CEO ndiye mukuru wepamusoro wekambani uye paari anowira mabasa makuru, sekuita sarudzo dzakakosha uye kutungamira nzira dzinozotungamira kambani kuzadzisa zvinangwa zvayo.
Uku ndiko kukosha kwaro mubhizinesi renyika panguva ino kuti kubudirira kana kukundikana kwekambani kunoenderana nekutarisira kwayo. Kusvika padanho rekuti sarudzo dzake dzakakosha kwaari kuvandudzwa kwemhando ipi neipi yemabhizinesi mitsara. Kwete chete zvine chekuita nemabhizimusi epamhepo kana edhijitari, asi zvinopesana inovharawo makambani echinyakare, kunyangwe aine simba rakaderera.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kutarisa kune chimwe chinhu kuti kumanikidza kwayo kujeke kubva zvino zvichienda mberi. Uye ndezvekuti mutungamiri wekambani ndiye anoona nezve hutongi hwekambani, ukuwo CEO ari iye anoona nezvekuita marongero. Icho chidiki nuance inoratidza mabasa ayo echokwadi mubhizinesi chikamu. Hazvishamise kuti iri izwi rakashanduka nekufamba kwenguva uye rave kuunganidza mashandiro matsva kubvira zvabuda makore mashoma apfuura.
1 Mabasa e CEO
2 Unyanzvi hwavanofanirwa kupa kuti vashandise chinzvimbo
3 Hakananga hunhu hweakanaka CEO
4 Zvimwe zvinzvimbo zvine maitiro akafanana
Mabasa e CEO
Iye CEO kana Chief Executive Officer anofanirwa kutarisira shandura mamwe mabasa ave echokwadi. Semuenzaniso, mune zvinotevera zvatiri kuzokufumura pazasi:
Uyu ndiye munhu ari pamusoro pekuita sarudzo maererano nekudyara uye kushandiswa kwemabhizinesi mabhajeti kuwana purofiti. Nekudaro kukosha kweichi chinzvimbo chebhizinesi.
Kune rimwe divi, rimwe rebasa rake rakakosha rinotungamirwa pakuronga rake bhizinesi. Kana uchitsanangura mashandiro avo, chokwadi chisingagone kuitika zvisati zvaitika hachingakanganwike: kutanga pane zvese, CEO anofanirwa kugadzira chirongwa chebhizinesi un "Bhizinesi Chirongwa". Kana izvo zvakafanana, chirongwa chebhizinesi mumutsara webhizinesi rako, chero zvarakaita.
Masangano emabasa ndechimwe chikamu chakakosha kwazvo muchirongwa chebasa rako Mupfungwa iyi, mamwe emabasa akakosha emukuru mukuru kuziva marongero evatungamiriri vakasiyana vemadhipatimendi aanazvo musangano rake nekudaro anotarisa mashandiro avo.
Simba ravo rekubatisisa nderimwe remhando dzekuwedzera dzinofanirwa kuratidzwa nehunyanzvi uhu Kwete pasina, iwe unofanirwa kuziva kurongedza madhipatimendi akasiyana; Saiye CEO zvaari, mushure mezvose, haazove nesarudzo kunze kwekuve nekwaniso uye kugona kuronga madhipatimendi ese.
Ehezve, iwe unofanirwa kuziva nzira yekutungamira timu yehunyanzvi kuitira kuti zvese zvinangwa zviitwe mune yakati rebei kana zvishoma zvine musoro nguva. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kuti uve mukuru CEO iwe unofanirwa kuziva nzira yekutungamira, kukurudzira uye kukurudzira vashandi vari mukutarisira. Mazuva ese basa iri reMukuru wekuziva kukurudzira nekuchengetedza tarenda resangano rake kwakanyanya kukosha.
Kudzora maitiro ese mukambani ndechimwe chezvinodiwa izvo zvinofanirwa kuzadzikiswa mune ino manejimendi chinzvimbo. Nekwaniso yepamusoro yekuchengeta kuitiswa kwemaitiro akasiyana ekutevera uye kutevedzera chirongwa chebhizinesi chakatangwa.
Zvakare humwe hunyanzvi husinga fanire kuenda kusaonekwa chero nguva uye ndiwo iwo atichataura pazasi:
Chengetedza hukama nevatengesi uye vagovani.
Ziva uye ronga zvekutanga zvinoenderana nenguva inofungidzirwa mukutungamira kana chirongwa chesangano.
Tsanangura mazano epasirese yekambani munzvimbo dzakaita seIT, HR kana Bhizinesi.
Unyanzvi hwavanofanirwa kupa kuti vashandise chinzvimbo
Chimwe chinhu chinoda kuongororwa kubva ikozvino ndicho icho chine chekuita nemano avo uye izvo zvisina chekuita nemabasa avo. Kwavanoenderana mushure mekuwedzera zvinhu zvakasiyana iyo inowana kukosha kwakakosha mune iri basa kana chinzvimbo manejimendi. Semuenzaniso, kuburikidza nezviito zvinotevera:
Yakakura ruzivo mune manejimendi zvinzvimbo.
Iva nehumwe hunhu.
Uye zvechokwadi ivo vanofanirwa kupa hukuru hukuru hwekuzvipira kune yako kambani.
Zvese izvi pamwe zvinounza kubuda kweakanakisa CEO kana Chief Executive Officer. Kunze kwekukurudzira kwauinako mune imwe nhambo yehupenyu hwako. Nekuti mukuita, hazvigone kukanganikwa kubva zvino zvichienda mberi kuti chinzvimbo ichi chichava nyanzvi yakanaka uye icharatidza hunyanzvi hwekuita sarudzo, nekuti iye anokwanisa kukwanisa kugadzira marongero akanakisa anotungamira mukubudirira mukambani yake.
Hakananga hunhu hweakanaka CEO
Imwe yeanonyanya kukosha anogara mukuve akasununguka kwazvo mukuita sarudzo. Ndokunge, kuva ne vhura pfungwa Zvinoreva kuve anodisa kuyedza zvinhu zvitsva, kubvuma akasiyana mikana yekugadzirisa dambudziko, uye kutora njodzi kana zvichidikanwa.
Kunyangwe pamwe uyu maneja akasarudzika anosiyaniswa neyakagadzika yake yekutora sarudzo dzakaringana uye dzinoenderana nekambani yake. Mupfungwa yekuti zvinodikanwa kuti uzive maitiro ese, kutsvaga izvo zvakanakira bhizinesi uye mapato anofarira.
Kutaurirana ndeimwe yehunyanzvi iyo isingafanire kunge isipo mune akanaka CEO. Kusvika kune iyo iyo imwe yeanonyanya kusarudza mapoinzi kuvaziva Nekuti kupera kwezuva chokwadi ichi chinoreva hukama nevateereri vakasiyana uye, dzimwe nguva, kunyangwe netsika dzakasiyana. Zvinogona kunge zviri izvo kana iwe ukazviwana iwe pane kanopfuura kamwe chiitiko.
Kuve nhaurirano ndeimwe yakawedzera kukosha kushandisa ichi chinzvimbo manejimendi. Zvakanaka, usakanganwa kuti kubva panguva ino zvichienda mberi, unenge usina imwe mhinduro kunze kwekutarisana nematambudziko akasiyana siyana, pamusoro pekumanikidza kuri muchinzvimbo. Mauri uchafanirwa kupindirana pakati pezvikamu zvakasiyana zvinoita maitiro.
Uye hazvikanganwike kuti mweya wake wekutaurirana ndeimwe yemamwe madhinominesheni eiyi nyanzvi yehunyanzvi. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti inofanirwa kupa pfungwa yakasimba kwazvo yerunyararo inozoshandira kupindirana kusvika padanho rakakura mumaitiro mairi akanyudzwa.
Zvakare nehunyanzvi hwake mukudyidzana kuitira kuti zvese zvidzidzo zvikwanise kuzadzikiswa, sezvazviri, zvido zvake zvekutora basa rehunyanzvi iri chero nguva muhupenyu hwake.
Zvimwe zvinzvimbo zvine maitiro akafanana
Chero zvazvingaitika, zvakajairika kune dzimwe nzvimbo kusanganiswa nemabasa akafanana asi izvo zvinopa misiyano midiki yaunofanira kufunga nezvayo kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya, kuve nekunzwisisa chaiko kweizvo chaizvo izvo CEO. Kunge idzo dzatiri kuzokupa pazasi:
CMO (Chief Kushambadzira Officer). Inotarisira Kushambadzira manejimendi, senge yekutengesa manejimendi, kusimudzira chigadzirwa, kushambadza, kutsvagisa musika uye kushandira vatengi. Basa rayo guru nderekuchengetedza hukama hwakanaka nevatengi vekupedzisira.
CFO (Mukuru Wezvemari). Financial Director wekambani inoona nezve kusarudza mari, mari uye njodzi. Iye ari pamusoro pehupfumi nehupfumi kuronga kwekambani.
CIO (Chief Information Officer). Ongorora izvo zvinobatsira izvo kambani ichawana kubva kumatekinoroji matsva. Anotarisa mukuvandudza mashandiro uye ndiye anokoshesa masisitimu eruzivo rekambani padanho rekuita.
CTO (Chief Technology Officer). Iye anoona nezve timu yeinjiniya uye yekushandisa nzira yehunyanzvi yekuvandudza chigadzirwa chekupedzisira.
CCO (Chief Communications Officer). Iye ari pamusoro pekambani mukurumbira wekambani, anobata vezvenhau uye anovandudza marongero eBranding.
COO (Chief Anoshanda Officer). Iye ndiye director weOp Operations, uye anotarisa mashandiro anoita kugadzirwa kwechigadzirwa uye sisitimu yekuparadzira. Uchishanda seCOO, iwe unowanzo simukira kune CEO sezvo iwe uchinge watonzwisisa iyo chinangwa uye zvinangwa zvekambani uye uri ruoko rwerudyi rweMukuru.
Sezvaungave iwe waona, pane zvakawanda zvinodiwa izvo uyu nyanzvi nyanzvi anofanirwa kusangana uye iwe unogona kuve unofarira mukuvandudza aya mabasa. Kana iri neiyi nzira, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekutevera nhanho dzatakataridza uye iwe unogona kunge uchikwanisa kuvandudza iri basa, iro kune rumwe rutivi rakabatana zvakanyanya nemabhizimusi epamhepo kana edhijitari. Nekuti pakupera kwezuva, mabasa avo anotangira pakudzidzisa vashandi vavo kune timu yakanaka yebasa. Seimwe yezvinhu zvakakosha pakukura kwekambani sezvo iri mushure mezvimwe zvakakosha zvinangwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi CEO uye nderipi basa rake mukambani?
Chii chinonzi CES kana Kuchengetedzwa Kwemagetsi Commerce?